Flash Drive ​ကို ​ဘယ်​လို ​နာ​မည်​မျိုး​ပေး​သင့်​သ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Flash Drive ​ကို ​ဘယ်​လို ​နာ​မည်​မျိုး​ပေး​သင့်​သ​လဲ .
​ကျွန်​တော့​ရဲ့ memory stick ​ကို safely remove ​မ​လုပ်​ပဲ​နဲ့ ​ဒီ​တိုင်း ​ဆွဲ​ချွတ်​လိုက် ​မိ​ပါ​တယ် ​နောက်​တစ်​ခါ ​ပြန်​ထိုး​တော့ ​ကျွန်​တော့်​စ​တစ် ​က​လေး​က ​ကျွန်​တော်​ပေး​ထား​တဲ့​နာ​မည်​နဲ့​မ​ဟုတ်​တော့​ပါ​ဘူး Removable Disk ​ဆို​ပြီး ​ပုံ​မှန်​နာ​မည်​ဖြစ်​သွား​ပါ​တယ် ​နောက်​ပြီး​တော့ ​စ​တစ်​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ရင် ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း​ပဲ ​မြင်​နေ​ရ​ပါ​တယ် ..
Memory stick ​တွေ​ကို ​အ​ကောင်း​ဆုံး​က ​အ​င်္ဂ​လိပ်​လို​ပေး​တာ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​ပါ . ​မြန်​မာ​လို ​ပေး​ထား​တဲ့ memory stick ​ထဲ​မှာ​ရှိ​တဲ့ pdf ​ဖိုင်​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် . ​တစ်​ခြား​ဖိုင်​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ဖွင့်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​တစ်​ခု​မ​ဟုတ်​တစ်​ခု ​ပြ​ဿ​နာ​ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ် .. ​မြန်​မာ​လို​ပေး​ထား​တဲ့ stick ​ထဲ​က pdf ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ရင် ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ error ​တက်​လာ​ပါ​တယ် . ​မ​ဖွင့်​ပေး​ပါ​ဘူး . Flash Drive ​နာ​မည်​ကို ​ဘယ်​တော့​မှ ​မြန်​မာ​လို ​နာ​မည် ​မ​ပေး​မိ​ပါ ​စေ​နဲ့ . ​အ​င်္ဂ​လိပ်​လို​ပေး​လိုက်​ပါ . Virus ​ကြောင့် format ​ချ​မ​ရ​တဲ့ Flash drive ​ကို (​မြန်​မာ​လို ​နာ​မည်​ပေး​ထား​ရင်​အ​င်္ဂ​လိပ်​လို​နာ​မည်​ပြန်​ပေး​လိုက်​ပါ) . ​ပြီး​ရင် ​တစ်​ခြား​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး​မှာ ​သွား​ထိုး . AutoPlay ​တက်​လာ​ရင် Cancel ​ပေး​လိုက် . ​ပြီး​တာ​နဲ့ format ​ချ​လိုက် . ​အို​ကေ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​ဗိုင်း​ရပ်စ်​ကြောင့်​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ ​အဲ့​လို​ဖြစ်​တတ်​ပါ​သေး​တယ် . ​ဒီ​ဖက်​က ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ virus ​ကြောင့် format ​ချ​မ​ရ​ရင် ​တစ်​ခြား​ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့ ​သွား​ချ . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​တစ်​ခု​သ​တိ​ထား​ရ​မှာ​က AutoPlay ​တက်​လာ​တာ​နဲ့ cancel ​ပေး​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​မ​ဟုတ်​ရင် ​အဲ့​ဒီ့​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို​ပါ Virus ​ဝင်​သွား​ပြီး format ​ချ ​မ​ရ​ဖြစ်​တတ်​ပါ​တယ် .